Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 33
Par Taratra sur 08/11/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Kajikajy politika, efa anjato taona, tsy nahavaha ny olana misy eto Madagasikara kanefa mbola io ihany no hidedahana sy hanimbana firenena eto. Kabary tsy valina, lainga marivo tototra… Fiheverana ny vahoaka ho bado sy azo hambakaina hatrany. Tsy misy na kely aza ny fitiavan-tanindrazana sy fitiavan-tanin-drazana. Ny sasany miezaka ny mampanjaka ny halako bika sy […]
Dia ahoana ny ho tohiny?
Par Les Nouvelles sur 07/11/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Raikitra ihany ny fidiran’ny mpianatra rehefa nahatsapa ny mpitondra fa vonona hiatrika ny valanaretina pesta ny tontolon’ny fanabeazana. Satria tsy azo hoe hajanona tanteraka ny fianarana kanefa ity taom-pianarana diavina ity no hanombohana ny fanavaozana izay tokony ho vita ny taona 2022. Maro ireo ray amam-dreny mbola be ahiahy ny amin’ny mety hitranga. Ny fiverenan’ny […]
Par Taratra sur 06/11/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Famadihana palitao, fivarotan-tena hahazoana toerana, fitadiavana sy fiadiana seza… Hatramin’izao, mbola izany ny hoe fanaovana sy fahaizana politika. Miara-dalana amin’izany ny fampandriana adrisa, fanaratsiana ny hafa, fanoherana bontolo… Manginy fotsiny ny fifampiandrasana kendry tohina, ny fanararaotana, ny fanakorontanana… Tsy zava-baovao rehefa mahazo fitondrana ny tsy firaharahana sy tsy fihainoana ny hafa, ny fitompoana teny fantatra […]
Par Taratra sur 04/11/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mandeha ny raharaham-pirenena, mihazakazaka ny fampandrosoana… Nampitsamboaboatra ny sasany izany talohaloha teo; eny, na eo aza ny fahasahiranam-bahoaka isan’andro vaky: fihanaky ny pesta, tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ady sy fandrobana tany etsy sy eroa… Tena marina ve izay lazaina? Milaza tena, mandoka tena, manamarin-tena… Eo ny tsirairay mitsara izay tsapany sy iainany any ifotony avy […]
Amin’ny fifidianana mihaona e !
Par Taratra sur 03/11/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy firaharahana ny fahantran’ny vahoaka sy ny tsy fandriampahalemana, fivarotana ankolaka ireo harem-pirenena (hazo sarobidy, biby ahina ho ringana, tanindrazana, sns) na fakana izany an-keriny, fanampenam-bava sy fampiasan-kery amin’ireo mitroatra manoloana izany tsy rariny sy tsy ara-dalàna izany, sy ny maro tsy ho voatanisa. Be ny voalaza teto mikasika ireo fahazaran-dratsin’ny fitondrana, izay mampitondra faisana […]
Par Taratra sur 02/11/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena havanana amin’ny fanaovana kajy, kajikajy raha ny marimarina kokoa, ity fitondrana HVM ity. Mahay fanorona koa e… Paika, teti-panorona. Angaha namelan-dry zalahy raha tsy tanteraka ny tetika. Tonga eo amin’izay niriany izy izao dia ny fahazoana ny sezan’ny filohan’ny Antenimierandoholona. Miampy indray izao ny hery… hery politika eo am-pelatanany. Raha izao fandehany izao, tsy […]
Par Taratra sur 31/10/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Na inona na inona zava-miseho sy zava-misy eto amin’ny tanàna, na ankaratsiana na ankatsarana, mbola ankamamian’ny rehetra izany hoe i Madagasikara. Mitsiriritra azy avokoa ireo vahiny, amin’ny vazantany efatra. Te handrombaka azy daholo izao tontolo izao. Sambatra ny Malagasy manana azy. Hafa mihitsy hoy aho, izany Madagasikara izany. Miavaka amin’ny Afrikanina ny Malagasy, na aty […]
« Précédent 1 … 31 32 33 34 35 … 54 Suivant »